Visits : 5267
Visits : 3682
အလုပ်ကို ထိရောက်မှုအရှိဆုံး လုပ်နိုင်သူများ၏ လုပ်ကိုင်ပုံ အလေ့အထ ၇ မျိုး (Steven Covey ၏ အဆို) - The Seven Habits of Highly Effective PeopleBe proactive (တက်ကြွစွာလုပ်ကိုင်လေ့ရှိရမည်)တက်ကြွစွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်မှာ မိမိကိုယ်တိုင်အဆုံးအဖြတ်ပေး၍ အခြေအနေတစ်ခုကို အကောင်းဆုံးကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရမည်။ ထိန်းချုပ်ခံရသူ မဖြစ်သင့်။Begin with the end in min...
Visits : 2947
အချိန်သည် ငွေဟု ဆိုရိုးပြုကြသည်။ ကျားစီးဖားစီး စီးပွားရှာနေသူတို့သည် ဤအချက်ကို ပို၍သဘောပေါက် ကြသည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခု အဆင်ပြေစွာ လည် ပတ်နေရာမှ အရှိန် အဟုန် ရပ်တန့်၊ သို့မဟုတ် လျော့ကျသွားသည်နှင့် လျော့ကျသည့် အချိုးကျဝင်ငွေ ထိခိုက် စမြဲပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အဟန့် အတားအနှောင့် အယှက်ဖြစ်မှုကို မလိုလားသလို ထိုအဟန့် အတား အနှောင့် အယှက် ဖြစ်စေနိုင်သူကို မလ...
Visits : 4706
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဟာ လှိုင်မြို့နယ်ရှိ သမိုင်းကောလိပ်နယ်မြေမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (လှိုင်နယ်မြေ)၊ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် (လှိုင်နယ်မြေ) တို့နဲ့ ဆက်စပ် တည်ရှိပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်မှာ ပင်မအဆောင်ကြီး (၃) ဆောင်ရှိပြီး တစ်ဆောင်လျှင် အထပ်သုံးထပ်စီနဲ့ ဆောက်လုပ် ထားရှိပါတယ်။ အဆောင်တိုင်းရဲ့ မြေညီထပ်မှာ ကွန်ပျူတာစက်ခန်းများ၊ ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယ...
7 - 11 of ( 11 ) records